ဖြူ စင်သောစိတ်ကလေး: အချစ်သည် ...တစ်ခါတစ်ရံ၌.....(အပိုင်း - ၁၀)
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) 16 September 2011 at 20:17
ပိုစ့်က အစကနေဖတ်ထားတာ နည်းနည်းကြာသွားတော့ မေ့သွားလို့ အစကနေ ပြန်ဖတ်လိုက်ရသေးတယ်။
နုငယ်နဲ့ထွန်းသစ် ပြေလည်သွားကြတဲ့ အတွက် ဝမ်းသာပါတယ်။
ဒါနဲ့ အပိုင်း၁၀လို့ဘဲရေးထားတော့ ဇာတ်သိမ်းမဟုတ်သေးဘူးလား။ ဆက်ရန်ရှိသေးတာလား..
ဆွေလေးမွန် 16 September 2011 at 21:32
ဟုတ်တယ် မချောရေ နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းကျန်သေးတယ်။ အစကပြန်ဖတ်လိုက်ရတယ်ဆိုလို့ အားနာရတယ်။
ဇာတ်သိမ်းပိုင်းကို အမြန်ဆုံးပြီးအောင် ကြိုးစားပါ့မယ်လို့
အလင်းသစ် 18 September 2011 at 11:42
ဇာတ်သိမ်းပိုင်းလေး မြန်မြန်ရေးပါ ပီတိရေ့။။။
mabaydar 20 February 2012 at 23:02
ဒီအပိုင်းအတွက် ကွန်မန့်လေးကတော့ ... ဒီအပိုင်းလေးက နည်းနည်းတိုတယ်နော်...
အမေ့ရင်ခွင်အငွေ့တွေနဲ့ ခိုလှုံနေစဉ်က အမေ့ကိုမခွဲချင်ဘူး ရင်ခွင်သစ်တွေရဲ့ အရိပ်အောက်မှာ ဘ၀ကိုအရောင်ဆိုးချိန်တန်တော့ ရင်ခွင်ဟောင်းအမေ့အိမ်ကို ...
လူတွေ လူတွေ တော်တော်ခက်ကြတာပဲ။ ကိုယ့်ဝမ်းစာ ကိုယ်ရှာစားနေရတာ။ ပိုက်ဆံမရှိရင် စိတ်ဆင်းရဲရတာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ သိတာ။ ဘေးကနေ သူတို့လဲကူနိုင...
ခေါင်းစဉ်ဖတ်လိုက်ရင် ဘာလိုလို ညာလိုလို. အဟဲ ဘာပျောက်တာလဲလို့ မမေးပါနဲ့ . ဘလော့ တွေမရေးပဲ အလုပ်တွေရှုပ်ပြီး ပုံမှန်လဲ ဘလော့တွေ လိုက်ပြီး စာမ...
လတ်တလော စိတ်ဆန္ဒများ (ဆွေလေးမွန်)
(1)အစားချင်ဆုံးအစားအစာ- မုန့်ဟင်းခါး၊ ပေါ့ဆိမ့်လက်ဘက်ရည်လေးတစ်ခွက်၊ ကြေးအိုး၊ ၀က်သားဒုတ်ထိုး (အားလုံး အစားချင်ဆုံးကြီးပဲ ဆက်ရေးနေရင် စားခ...
အချစ်သည် ...တစ်ခါတစ်ရံ၌.....(အပိုင်း -၁)
(မင်းလွင်) ထွန်းသစ် ဒီနေ့ မျိုးကြီး သူ့အဖေ သောက်နေကျ စီးကရက် တစ်ဗူးမလာတယ်တဲ့ကွ။ ငါတို့ မုန့်စားဆင်းချိန် စမ်းမလို့ ။ မင်းရော (ထွန်းသစ်)...
သင်္ကြန်အကြတ်နေ့ ..အတက်နေ့ နှစ်ရက်တွင် မိုးနှင့် မွှေး တို့ ပျော်နေခဲ့ သလောက် မပျော်နိုင်သူက အောင်တေဇ. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မိုး နှင့်မွှေ...